Fitaovana 5 mahatalanjona ho an'ny Minimalista Marketing amin'ny atiny | Martech Zone
Fitaovana 5 mahatalanjona ho an'ny Minimalista amin'ny marketing amin'ny atiny
Talata, Janoary 23, 2018 Jessica Theifels
Mihevitra ny tenako ho minimalista amin'ny marketing amin'ny atiny aho. Tsy tiako ny tetiandro sarotra, ny fandaharam-potoana ary ny fitaovana fanaovana drafitra — amiko, izy ireo dia mahatonga ny fizotrany ho sarotra kokoa noho ny tokony ho izy. Tsy lazaina intsony fa ataon'izy ireo henjana ny mpivarotra atiny. Raha mampiasa fitaovana enti-mandamina tetiandro 6-volana ianao — izay andoavan'ny orinasa anao dia mahatsapa ho adidy ianao hifikitra amin'ny antsipiriany rehetra amin'izany drafitra izany. Na izany aza, ny mpivarotra atiny tsara indrindra dia mailaka, vonona hanova atiny rehefa miova ny fandaharam-potoana, mipoitra ny hetsika na misy ny fangatahana.
Samy minimalist aho ary mahay mandanjalanja amin'ny asako, ka raha mbola miantehitra amin'ny fitaovana vitsivitsy amin'ny fikarohana, drafitra, fanovana ary maro hafa, dia mandroso sy maimaim-poana izy rehetra. Androany aho mizara vitsivitsy amin'ireo ankafiziko mba hanampiana anao hanamaivana ny enta-mavesatra amin'ny ezaka ataonao amin'ny marketing.
Ho an'ny: Fanovana sary sy famoronana sary
Na dia mety tsara aza ny mianatra sy mampiasa fitaovana toy ny Adobe Photoshop amin'ny famoahana sary, tsy manam-potoana hianarana azy fotsiny aho, na ny vola handoavana izany. Nanomboka nampiasa Photoscape X aho (ho an'ny Mac ihany; miala tsiny amin'ireo mpampiasa Windows) taona vitsivitsy lasa izay ary miankina amin'izany na amin'ny fotoana inona na amin'ny fanovana sary na famoronana sary nataoko, izay be dia be.
Afaka manao fanitsiana mahazatra aho, ao anatin'izany ny cropping, ny fanitsiana loko sy ny fanitsiana ary ny fanovana habe. Ny tena ampiasako Photoscape indrindra dia ny mpanonta, izay ahafahanao manampy lahatsoratra, endrika, loko ary maro hafa amin'ny sary. Manampy amin'ny famoronana sary ara-tsosialy io, fa koa amin'ny fampidirana zana-tsipika na boaty amin'ny pikantsary (toy ny sary amin'ity lahatsoratra ity), izay zava-dehibe rehefa manoratra sombim-pianarana na mangataka fanovana famolavolana ny atiny.
Mampiasa Photoscape aho hamoronana sary media sosialy ho an'ny iray amin'ireo mpanjifako ary afaka mahita ny sasany amin'ireo vokatra vita eto ambany ianao. (Fanamarihana: ny sary namboarina dia namboarina tamin'ny Photoscape!)
Fitaovana fanamarinana fahefana lehibe
Ho an'ny: Fikarohana
Ny asako amin'ny maha-mpivarotra votoaty azy dia mitaky fanombanana ny lanjan'ireo tranonkala isan-karazany, miaraka amin'ny iray amin'ireo refy lehibe indrindra dia ny Domain Authority. Na dia misy fitaovana maro karama azonao ampiasaina aza, hitako ny tsara indrindra sy mora indrindra ary azo atokisana indrindra dia ity fitaovana miorina amin'ny tranonkala ity. Tsotra ny hevitra raha ny fandehany: mandika sy mametaka ny lisitry ny tranokala ianao, manamarina boaty momba ny angon-drakitra tianao ho hitanao (Domain Authority, Page Authority, Moz Rank, IP Address), ary avy eo miandry ny valiny hipetraka eto ambany.
Mety izany raha manao fikarohana eo amin'ny tranonkala amin'ny ambaratonga lehibe amin'ny alàlan'ny Google Sheets ianao satria afaka mandika sy mametaka mivantana avy amin'ilay takelaka mankany amin'ilay fitaovana. Tsy misy dingana fanampiny, tsy manampy koma - fanaovana izay mety ho asa mandreraka, mora kokoa sy milamina kokoa. Tsy mila kaonty koa ianao, midika izany fa manana tenimiafina latsaky ny tadidinao ianao.
buffer & Hootsuite
Ho an'ny: Fandaharam-potoana sy fihainoana ara-tsosialy
Te hampiditra azy roa ireo aho satria samy mampiasa sy mahita azy ireo ho toy ny vokatra mitovy amin'ny hery samy hafa. Betsaka ny fitaovana misy karama azo ampiasaina, ary efa nampiasaiko ny maro tamin'izy ireo, saingy rehefa tonga amin'ny fitaovana tsotra sy maimaim-poana dia ireo no tiako indrindra. Ity no tiako amin'ny tsirairay:
fandaharam-potoana: Ny tanjaky ny buffer ho an'ny mpivarotra atiny dia madio sy mora hivezivezy. Raha tsy misy interface sarotra, dia ho hitanao mora foana izay kasaina hatao sy izay fantsona poakaty. Ny analytics amin'ny fitaovan'izy ireo maimaim-poana dia kely dia kely, nefa manan-danja ihany.
Sosialy rehetra: Hootsuite dia miasa ho toy ny fitaovana fihainoana amin'ny ankapobeny fa tsy dia be loatra. Ny lafin-javatra tiako indrindra amin'ity fitaovana ity dia ny afaka manampy renirano hanaraha-maso ireo voalaza, teny lakile isan-karazany na koa hafatra mivantana amin'ny kaonty tsirairay. Na dia ampiasaina ho toy ny fitaovana fandaharam-potoana izay miasa araka ny nampoizina ihany koa, ny kaonty maimaim-poana dia tsy mahazo miditra amin'ny analytics.
Ho an'ny: Drafitra
Betsaka ny rindranasa sy lisitry ny lisitry ny zavatra tokony hatao ary nandany taona aho vao nahita iray izay tena io no notadiaviko. Ny fanamby amin'ny fampiharana lisitry ny raha-hatao dia ny mahasarotiny azy ireo - maro no mitaky ny fananan'ny asa tsirairay daty voatondro, ohatra, na ny fampiasana ireo interface sarotra izay nalamina isan'andro ny asanao, ka manahirana ny mijery ny herinandro manontolo indray mandeha.
TickTick no zavatra rehetra notadiaviko sy bebe kokoa, ary mety tsara ho an'ny mpivarotra atiny izay mitantana kaonty na mpanjifa marobe. Ity no mahatonga azy ho tonga lafatra amin'ny mpivarotra atiny minimalista:
Ao amin'ny All Tab, ianao dia afaka mahita asa ho an'ny mpanjifa tsirairay amin'ny fotoana iray. Ny mpanjifa tsirairay dia miaina toy ny “lisitra” azy manokana, izay hitanao etsy ambany:
Azonao atao ihany koa ny mijery ny lisitra tsirairay avy, ka rehefa mandeha mandritra ny andro fiasanao ianao dia afaka mifantoka amin'ny mpanjifa iray fotsiny, manamora ny fijanonana amin'ny lahasa raha tsy variana.
Ny endri-javatra voalohany tadiaviko dia ny fahafahana manamarina ireo lahasa tsy ao anaty lisitra. Miaraka amin'ny TickTick, misy na inona na inona nanamarina ny lisitra miaina eo ambany, ka manamora ny fitaterana any amin'ireo mpiara-miombon'antoka raha ilaina izany, na hanara-maso izay nataonao tamin'io andro io.
Azonao atao ihany koa ny mampiasa azy io ho fitaovana fandrindrana votoaty, miaraka amin'ny lisitra iray isam-bolana sy ny atiny kasainao hamoronana. Satria azonao atao ny manampy daty voatondro, naoty, na laharam-pahamehana ary boaty ao anatin'ny faritra misy ny famaritana, azonao atao ny mandamina ny antsipiriany mora foana.
Haro ary Clearbit
Ho an'ny: Mitady loharano
Mbola te-hampiditra azy roa ihany aho satria misy tanjona itovizany - nefa tena hafa tanteraka amin'ny fotoana iray. HARO (Help a Reporter Out) dia tsy fitaovana fotsiny, ary serivisy kokoa, fa tena sarobidy amiko amin'ny maha mpivarotra atiny azy satria mora ampiasaina. Tsy mila mamorona kaonty ianao raha tsy tianao, ary ny valiny amin'ny fanontanianao dia tonga hatrany amin'ny boaty-nao — izay efa nandanianao ny ankamaroan'ny fotoanao ihany. Raha mila mitady loharano ho an'ny lahatsoratra ianao dia izao no fomba hanaovana azy.
Clearbit dia fomba iray hafa hikarohana loharano, saingy ampiasako ihany koa izany hifandraisako amin'ireo tompona tranonkala sy mpanonta. Mipetraka ao anaty boaty mailakao izy ho add-on, ary mamela anao hikaroka fifandraisana amin'ny tranokala saika rehetra — ao anatin'ny boaty fampidirana anao daholo. Amin'ny maha-mpivarotra atiny ahy izay vahinin'ny mpitsidika ary mifandray hatrany amin'ireo tonian-dahatsoratra sy mpivarotra hafa dia mampiasa an'io fitaovana io isan'andro aho.
Ny Minimalista dia tsy midika hoe tsy mandaitra
Tsy mila mampiasa fitaovana sarotra sy lafo vidy ianao satria misy fotsiny. Na dia mety ilaina aza ny sasany amin'ny fitantanana marketing atiny amin'ny ambaratonga orinasa, raha toa ahy ianao, mitantana mpanjifa vitsivitsy, na miasa amina fikambanana iray, dia ireo ihany no ilainao. Atambaro azy ireo amin'ny Google Drive (Sheets and Docs), Gmail ary ny hafa, ary afaka milamina sy mahomby ianao nefa tsy very amin'ny fifangaroana fitaovana sarotra.
Tags: bufferfanamarinana faobemazavaGmailGoogle DriveGoogle Sheetsfamolavolana SaryHarohootsuitesary fanovanaphotoscapesary xfikarohanarobin guptaloharanom-baovaoticctick
Nanoratra nandritra ny 10 taona mahery i Jessica Thiefels ary mpanoratra amin'ny fotoana feno, mpanolo-tsaina amin'ny marketing amin'ny atiny ary tompona orinasa. Nasongadina tao amin'ny Forbes sy Business Insider izy ary nanoratra ho an'ny Virgin, Manta, BPlans ary maro hafa.
Lahatsoratra tsy ara-potoana amin'ny paikadin'ny marketing Influencer ho an'ny trano fandraisam-bahiny
Moa ve ny Fikarohana Feo eo An-tampon'ny Varotra Manova?
Jan 31, 2018 ao amin'ny 11: 38 AM
Jessica, tiako ilay mpitsikilo Authority nolazainao.
Inona no ataonao aorian'ny nidiranao ny sandan'ny tranokala raha tsy mampaninona anao ny mizara?